EPL: Kooxda Chelsea oo soo degtay kaalinta afaraad ee horyaalka, kaddib guul ay ka gaartay Southampton … + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Kooxda Chelsea oo soo degtay kaalinta afaraad ee horyaalka, kaddib guul ay ka gaartay Southampton … + SAWIRRO
Haaruun October 30, 2016
(London) 30 Okt 2016 – Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa guul ka soo gaartay naadiga Southampton oo ay booqatay kulanka ka tirsan kulamada 10-aad ee Premier League, waxaana ay uga soo adkaatay 2-0.
Chelsea ayaa goolka koowaad la timid qeybta hore ee ciyaarta, waxaana 6’daqiiqo oo qura shabaqa soo taabtay Eden Hazard kaddib markii baas uu ka helay Victor Moses uu inta difaacyada Southampton ugu gambiyey kubadda shabaqa gaarsiiyey, sidaas ayaana lagu nastay Blues oo ciyaarta ku hoggaaminaysa 1-0.
Eden Hazard ayaa gool dhaliyey 3 kulan oo xiriir ah horyaalka markii ugu horreysay tan iyo bishii April sanadkii 2012-kii.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Chelsea ayaa la timid goolka labaad waxaana 55′ daqiiqo kubbad uu ka soo tuuray bannaanka xerada ganaaxa u dhaliyey Blues weeraryahankeeda Diego Costa, waxaana uu sidaas ku dhaliyey goolkii labaad ee kulan oo ay Chelsea ku adkaatay.
Waxa uu sidaas ku dhaliyey Diego Costa goolkiisii 8-aad ee Premier League, isaga ayaana hoggaanka u haya haatan gooldhalinta.
Kooxda Chelsea ayaa sidaasi u soo degtay kaalinta afaraad ee kala horreynta horyaalka Premier League, waxaana ay leedahay 22-dhibcood 10 kulan oo ay ciyaartay.
Robert Lewandowski oo xaqiijiyay inuu ku dhawyahay inuu heshiis cusub u saxiixo Bayern Munich
Daawo sawiradii ugu qurxoonaa ee laga soo qaaday kulankii fiinaalka ee koobka Jeneraal Daa'uud